आर्यनको इन्ट्री भएपछि रेखाले गरिन् र्पण र सुदर्शनलाई आउट ! Weekly Nepal
आर्यनको इन्ट्री भएपछि रेखाले गरिन् र्पण र सुदर्शनलाई आउट !
काठमाडौं । झण्डै ७ वर्षपछि नायिका रेखा थापा र नायक आर्यन सिग्देललाई दर्शकहरुले एकसाथ ठूलो पर्दामा देख्न पाउँदैछन् । ‘कसले चोर्यो मेरो मन’ पछि एकअर्काको मुख समेत हेर्न नचाहने आर्यन र रेखा फेरी एकपटक सारा दुश्मनी भुलेर फिल्म ‘रुद्र प्रिया’ मा देखिँदैछन् । फिल्म ‘किस्मत’ बाट नेपाली रजतपटमा भित्रिएका आर्यन अहिले आफ्नो स्टारडम बचाउने फिल्मको खोजीमा छन् भने नायिका रेखा पनि खस्कदै गएको आफ्नो स्टारडम जोगाउने धाउन्नमा छिन् । यसैले पनि यी दुईको मिलन भएको खबरले सिनेबजार यतिबेला राम्रै गर्माएको छ ।